Akụkọ - Mmepụta gburugburu ebe obibi
Kwụ mgbapụta akụkụ
Vetikal mgbapụta akụkụ
Mechanical Seal na akụkụ
Mmepụta gburugburu ebe obibi
Companylọ ọrụ anyị na-agbaso echiche nke ịdị mma gburugburu ebe obibi na nchekwa nchekwa akụ. N'oge na-adịbeghị anya ọnọdụ nchebe gburugburu ebe obibi dị njọ, ụlọ ọrụ anyị na-aza nke ọma ma na-arụpụta nchebe gburugburu ebe obibi.
1. Kpochapu akụrụngwa na-abaghị uru ma webata ngwa ọrụ dị elu. Anyị na-ewepụ ụlọ ọrụ na-abaghị uru ma webata ngwa ọrụ dị elu na oge a kara aka iji meziwanye arụmọrụ na-arụ ọrụ, na-ebelata mkpochapu mkpụkọ n'otu oge na-achọpụta mmetọ efu na nsị micro na mmepụta.
2. Kwadebe ngwongwo iji zute ụbọchị nnyefe kwetara na ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike. Kwadebe ngwongwo n'ọdịnihu maka iwu oge niile iji hụ na enwere ike ịnweta ihe site n'aka ndị na-ebubata ya n'oge maka nhazi na nzukọ ọzọ, iji hụ na nnyefe ngwaahịa na ndị ahịa n'oge.
Okwu: Ft 22, Xingji Future City B, No.155 Changjiang Road, Shijiazhuang, Hebei Province, China